किताबमाथिको कर, शहीद–खेतीको रहर : खै समृद्धिको प्रहर ?
‘मेरी धारणा है कि मानवका चिन्तन सबसे मूल्यवान है । उसकी कीमत नहीं आँकी जा सकती । मुझे विश्वास है कि भविष्य मे किताबें जिन मे मानवका सम्पूर्ण चिन्तन संग्रहीत है मुफ्त होंगी ! (कोन्सतान्तिन त्सित्योल्कोब्सकी ‘लेनिन हमारे जीवनमे पृष्ठ १४१) !’
यस्ता दिनहरू एकादेशका कथा भए । किताब महंगा छन् । पढ्ने मान्छे छैनन् । प्रायः किताब लाइब्रेरीमा धूलोले ढाकिएर बस्छन् । औंलाले किच्च मोबाइलको स्क्रीनमा थिच्दा संसार देखिने यस युगमा किताब बिराना हुन थालेका छन् तर किताबको साइनो सिधै मान्छेको मन र मस्तिष्कसित हुने भएकाले किताबको महत्त्व घट्दैन ।
महत्त्व नघट्ने भएपनि घटाउन दुस्साहस गर्न खोजिँदैछ । भर्खरैको हाम्रो बजेटको प्रस्तुतिपछि एउटा राष्ट्रिय दैनिकले लेख्यो, ‘किताबमा कर कसिकसाउले किताबको नियन्त्रण होइन, अन्ततः ज्ञान शिक्षाको नियन्त्रण गर्छ ।’ किताबमाथिको करको दुष्परिणाम एसईईको नतिजाले पनि देखाइरहेकै छ । यसले गरीबहरूको बुद्धि कमै हुन्छ भन्न खोज्यो । यो भयंकर खतराको संकेत हो । ज्ञानकै अभावले बुद्धको देशमा बुद्धुहरू भरिभराउ भइँदैछ । जिउँदा शहीद नारकीय जीवन बाँचिरहेका छन् ।
मिडियामा निर्मला लगातार समाचारका शीर्षक बनेकी छिन् । तिनी बिम्ब हुन् । हजारौं जिउँदा शहीदहरु बिचल्लीमा छन् ।
किताबमाथिको करसँगै लालबन्दी (सर्लाही) का कुमार पौडेलको सहादतको समाचार डँडेलोजस्तो फैलियो, फैलिँदैछ । संसदमा सत्तासीन पार्टीकै सांसद जनार्दन शर्माले चर्को स्वर उराले । उनले भने, ‘सर्लाही घटनाले पञ्चायतको झझल्को दियो ।’ पञ्चायत ढलेकै ३० वर्ष हुन थाल्यो । पञ्चका काला कर्तूतहरू समयको गर्तमा पुरिइसके । पञ्चायत झेल्ने बा–आमाहरू नाकाबन्दीका बेला पञ्चहरूले नून–मट्टितेल व्यवस्थित ढंगले नै बाँडेको बताउँछन् । कीर्तिनिधि बिष्ट र मरिचमानसिंह श्रेष्ठ लगायत पञ्चहरू सम्मानित देखिन्छन् । यिनीहरूले भारतको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै पदबाट बाहिरिन मञ्जुर गरेका थिए । पञ्चायत कालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले नामको अगाडि ‘प्रतिबन्धित’ शब्द जडेर गतिविधि सञ्चालन गरेकै थिए । २०४५ सालको भूकम्पको बेला १ जना पञ्चलाई राहत वितरणमा काखापाखा गरेको आरोपमा वीभत्स हत्या गरिएको थियो । दिनदहाडै जुलुसमा छाता र लट्ठीले घोचीघोची कर्ण हेंजु मारिएका थिए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे कमरेड रोहितले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । कठै, उनी पनि आज कांग्रेसभन्दा आफूलाई बलियो प्रतिपक्षी ठान्ने आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । २०७२ सालको नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रवादको नारा घन्काएर राजनीतिक यश आर्जन गरेपनि देशभित्र दैनिक उपभोग्य बस्तु र पेट्रोलको चरम हाहाकार मच्चाइएको थियो । यसैले अहिले राजावादीको बिल्ला भिरेरै ‘नेपालका लागि नेपाली’ भन्नेहरूले आफ्नो माल बेच्ने मौका पाएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस च्याँखे थाप्दैछ । सत्तापक्षीय कार्यकर्ता निधारमा हातको छेल पारेर ट्वाल्ल माइतीघर मण्डलातिर हेरिरहेका छन् । जननिर्वाचित सांसद रेशम चौधरी गह्रंगो फलामे सिक्रीले बाँधिएर जेलमा छन् । उनी ‘जेलमा २० वर्ष’का लेखक खड्गबहादुर सिंहलाई सम्झाउँछन् । राणाजीहरूले उनलाई विक्रा संवत् १९९७ देखि २००७ सम्म फलामको साँङ्लाले बाँधेर जेलमा राखेका थिए । दिलनिशानी मगरका अनुसार राज्यले रेशम चौधरीलाई ‘नेल्सन मण्डेला’ बनाउन खोजेको छ । उनको यस्तो उद्घोषपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको कानमा कुरो पुग्यो ।
राजनीतिजस्तै साहित्य झनै दूरावस्थामा छ । एउटा साहित्यिक सभामा पोखराका एक जना प्रगतिवादी लेखकले भने, ‘यहाँ घिसिपिटी लेखनीलाई प्रगतिशील साहित्य भनिँदैछ । सुँगुरका खोरकाहरू द्रौपदीको साडी रावणले तानेका थिए भनेर आपसमा लडाभाँती गरिरहेका छन् ।’ सरिता तिवारीले आप्mनै साथीहरूलाई कठोर बात लगाउँदै लेखेकी थिइन्, ‘प्रलेसको मूल नेतृत्व सत्ता संरचनाको कृतदास भयो । लेखकहरूले आप्mनै गालामा झापट हानेर आफूलाई झक्झकाएर बाटो छुट्टिएको बेला हो यो !’ बाटो छुट्टिएर स्वमार्गमा हिँड्नेहरूलाई उल्टै संकीर्णको बात लगाइन्छ । सत्तारुपी महका माखाद्वारा साहित्य, संस्कृति र नेपालीपनको जरोटुप्पो मेटाइँदैछ । शम्भू राईजस्ता सम्मानित मान्छेले पनि ‘प्रकाशको दाई हुँ’ भन्ने भद्रताको भाव सम्प्रेषण गर्न सकेनन् । कैयौं नेपाली गीत चोरिएर हिन्दीमा गाइएका छन् । विलियम वर्डसवर्थका ‘लुसी’ र ‘सोलिटेरी रिपर’जस्ता कविता हाम्रै महाकविका ‘चारु’ र ‘गाइन् तिनले घँसिया गीत’सँग हुबहु मिल्छ । संस्कृतिको जंगलमा अग्रजकै औंला समातेरै अनुजहरू हिँड्छन् । ससाना कुरामा ठूल्ठूला आवाज घन्काइँदा अजंगका भ्रष्टाचार मूसोझैं दुलाभित्र हराउँछन् । शम्भू राई र प्रकाश सपूतको मिलापत्र सकारात्मकै मान्नुपर्छ ।
शहीद खेतीका लागि हामीकहाँ गणतन्त्र, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सीमा समस्या, भ्रष्टाचार र राष्ट्रियता आदि मुद्दा छन् । धर्मनिरपेक्षता र भ्रष्टाचारको विरोध अहिले सतहमा टड्कारो गरी उठेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीलाई वाहियात चुटेर सत्ताले हिरो बनाएको छ । राज्य आतंककै ध्येय देखाएर पुलिसले नेकपा (विप्लव) का कार्यकर्ताको हत्या गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भारत (यूपी) का मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मुख खोले, ‘नेपालीहरू नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन तयार छन् ।’ विप्लवको बन्द असार १० गते पनि शानदार ढंगले सफल भयो । यो सफलता शहीद खेती सप्रिने संकेत हो । दिलबहादुर रम्तेलद्वारा शहीद कोटाको खाता खोलेपछि नै माओवादी जनयुद्धमा शहीद हुनेहरू लर्को लागेका थिए । अघिल्लो भेडोले नदीमा हाम फालेपछि पछिल्ला भ्mयाप–भ्mयाप जान्छन् । अहिले यत्ति बेथिति बढिसकेको छ कि मान्छेहरू मर्न र मार्न उद्यत हुँदैछन् । किताब पढिँदैन, मोबाइल निर्मित मनमस्तिष्कमा जीवनप्रतिको मोह घटेको छ । असार ९ गते राति ९ बजे ११ वर्षीय समीर लुवाङले घरैमा आत्महत्या गरे । यस्ता घटना दिनदिनै उठ्छन् र पानीका फोकाझैं फुट्छन् । समीरले लेखेको सुसाइड नोट गम्भीर छ । ‘मलाई कसैले माया गर्दैनन्, स्कूलमा केटाहरूलाई पिट्छन्/केटीहरूलाई पिट्दैनन् !’
हाम्रा आमादिदीले ठूल्ठूला हिंसा व्यहोर्नुपरेको साँचो हो तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो नदी बग्दैछ । मायाभावको अभावले डिभोर्स, हत्या र आत्महत्याका शृंखला बढेका छन् । पारिवारिक विघठनसँगै समाज रुग्ण बन्दैछ । समीरले घरमा र स्कूलमा पनि माया पाएन । समीर सबै मान्छेका प्रतिनिधि पात्र हुन् । हामी माया खोज्नेलाई घृणा दिन्छौं, क्रान्ति खोज्नेलाई गोली । सरकार ! म कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण सुनेर भावुक बन्छु । आद्र स्वरले भन्छु, दोरम्बाका शहीदहरू जति महान छन्, जनताका लागि कमरेड कुमार पौडेल उत्तिकै महान छन् । बलशाली कम्युनिस्टको सरकारलाई यस्तो ‘हत्या’ पटक्कै शोभनीय हुँदैन । क्रान्तिकारी र लुटेराको छ्यानब्यान हुनुपर्छ ।
‘कति सुन्दर हेर किताब चरो
दुई पंख फिजाउँछ यो विचरो !’
कविको उद्गारको किताबचरोमाथि बसेर हामी कथाको विष्णुलेझैं संसार विचरण गर्न सक्छौं । अफसोच, यो क्रम घट्दो छ । शहीद–खेतीको रहर बढ्दो छ । १० वर्षे जनयुद्धको प्राप्तिलाई ततेर्न नसक्दा ‘भिल्लको देशमा मणि’ मिल्किइरहेको छ । यद्यपि इतिहासको रथ पछाडि फर्किंदैन ।
असार १९, २०७६ मा प्रकाशित
डबल रोलमा आउँदै ऐश्वर्या काठमाडौं – ऐश्वर्या राय पछिल्लो समय थोरै फिल्ममा मात्रै देखिएकी छन् । उनी पछिल्लो पटक फिल्म ‘फन्ने खाँ’मा देखिएकी थिइन् । यो फिल्ममा उनले सुपरस्टार गायिकाको भूमिका थिर्व...